लघुकथा : लाहुरे दाई - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : इच्छुकको इमेल
कथा : कमरेडको प्रेम ! →
नरोऊ जानु म छिट्टै आछुनी अनि हाम्रा सुन्दर सपनाहरु सँगै साकार गरौंला नरोऊ है । मल्लो घरको काकालाई मंसिर लगाईदिनु भनेको छु । आमालाई सघाउनु,छिमेकीको प्यारी बन्नु,हन्छ है ? म जान्छु ल जुनु ?
यसरी आफ्ना मुहारबिन्दुबाट यी कोमल शब्दहरु उफार्दै भारत हानिएको थियो दिले दाई । जानु भाउजुले भने आफु सँग शब्द भण्डार नै नभए जसरी घुक्कघुक्क रुदैँ आफ्ना हातका दश औंला दिले दाईको पाउमा विसार्दै-ढोग्दै पछारिएकी थिईन् ।
९ वर्षको छँदा बुवालाई गुमाउन पुगेको दिले दाईको आफ्नो भन्ने आमा, मल्लोघरको काका र जानु मात्रै छन् क्यारे । वालापनमै बाबा गुमाएको दिले दाईको सबै काम उसकै काँधमा थुपारियो । स्कुलमा सबैको प्यारो दिले ४ कलासमै बिद्यालय छोड्न बाध्य भयो ।
खेतीपाती लगाउने,खनजोत गर्ने,मेलापात जाने सबै काम उसले सानै उमेरमा आमा सँगै सिक्यो । दिन बित्दै गए अब त दिले दाई पनि १८ वर्षको भइसक्यो । आमाले उसलाई बाबु अब तँपनि ठुलो भईसकिस् मेरो पनि दिनहरु डुब्न लागेको घाम झैँ हुदैछन् । अब त एउटा बुहारी नखोजी भएन । घरमा काम गर्ने पनि त चाहियो हैन त छोरो ?
दिलेले पनि आमाको वचनलाई अस्विकार गर्न नसकि मल्लोघरको काका सँग आमाले भनेको सबै कुरा राख्यो । काकाले पनि सहमति जनाउँदै आफ्नो ससुराली गाउँको अमरको छोरी जानु भन्ने केटी छ । सोझी छ अनि असाध्यै दुंख पाएकी,सानैमा आमा बित्नु भो रे । घरमा बुवा भाई र उ मात्रै छन् रे । उसैको कुरा गरे कसो होला । काका हजुरले भनेपछि म किन नाईनास्ती गरुँला र । हुन्छ,कुरा गर्नु म राजी छु । यसरी नै दिले दाईको जानु भाउजु सँग लगन जुरेको थियो र पछि विवाह हुन पुग्यो ।
कमाउन भनेर भारत लागेको दिले गाँजा तस्करीको अभियुक्त भनेर कञ्चनपुर गड्डाचौकी नाकामा प्रहरीबाट समातियो । झोलामा आफ्ना लगाउने लुगाकपडा र १ जोर जुता मात्र हालेको दिले आफै नै रनभुल्लमा प¥यो कसरी म गाँजा तस्करीमा परेँ ? तराई,पहाड लगायत हिमालका सञ्चार माध्यमहरुमा “गाँजा तस्कीमा १ जना अभियुक्त पक्राउ” भन्ने समाचार सबैको कानकानमा पुग्यो र पुग्यो उसकी प्यारी जुनु र आमाको कानमा ।
स्वयम दिलेले नै बुझ्न नसकेकको कुरा उसकी जुनु र आमाले बुझ्नु त आकाश पातालकको कुरा थियो । तर पनि जुनु र उसकी सासु आमाले (दिलेकी आमा) दिले प्रति दृढविश्वास गरिन्, ताकी यो काम दिलेबाट भएको हुनै सक्दैन । अरु कोहि नै शत्रु लागेका हुन सक्छन् भन्ने शंका उब्जाईन् । हुँदा पनि त्यस्तै दिले प्रहरी चौकीमा राखेको ३ दिन पछि प्रहरीको अनुसन्धान र दिलेको वयानले उसकै साथी धने र शैलेसले आफु सँग भएको गाँजा दिलेको झोलामा राखेर आफुहरु अर्को टाँगामा गएको र दिलेलाई एक्लै छोडेको प्रहरी अनुसन्धानबाट सावित भयो र दिलेलाई छुटकारा दिईयो भने ति दुई जना धने र सैलेशलाई पक्राउ गर्न प्रहरी तलासमा लागे ।
पहिलो गासमै ढुङगा’ भनेझैं दिले भारत जानेकी घर फर्किने भनेर दोधारमा पर्यो । घर पो के लगेर फर्किने ? जसोतसो मन बनाएर दिलेदाई भारतको व्यङ्लोर हानियो । व्यङ्लोरमा आाफ्नो मामा भएकाले पनि दिले दाईलाई काम खोज्न त्यति अप्ठेरो परेन । मामा सँगै काम ग¥यो । बेला बेला दिले घरमा आमालाई र आफ्नी प्यारी जुनुलाई फोन ग¥थ्र्याे । आफु सञ्चै भएको र कमाई पनि राम्रै भएको खवर सुनाउँथ्यो । यता उसकी प्यारी जुनु भने दिलेको यति राम्रो खवर सुनेर आफुले बुनेका सपना साकार हुने कल्पिदै मुसुक्क हाँस्दै र बेला बेला आफ्नो श्रीमानले भोग्नु परेको दु.ख सम्झिदै आँसु झार्दै थिईन् ।
दिन, हप्ता, महिना हुँदै दिलेले अर्को दशैंमा घर आउँछु भनेको पनि गईसक्यो अब त दिले भारत गएको २ वर्ष पुग्नै थालेछ क्यारे । बिहे गरेर ३ महिनामै घर छोडेको दिलेकी प्यारी जुनु अब त यता ऐना हेरेर अनुहारका रेखीहरु गिन्ती गर्न थाली होलिन् । आफ्ना चिल्ला राता गालाहरुलाई थप्पड हान्दि हुन् र भन्दि हुन् तँ अभागी । सँगै बिहे गरेकी तल्लो घरको माईलीको डेढ वर्षको छोरा देख्दा जानु भाउजु आफ्ना इमोस्नल ओर्गानहरुलाई सुम्सुम्याउँछिन होलिन् र दिले दाईलाई कल्पना गर्दि हुन् ।
उता दिले दाई पनि सोच्छन् होला मेरी मनकी प्यारी जुनु तिमीलाई मेरो काखमा बसेर दुःख–सुखका कुरा गर्न मन किन नहुँदो हो तर बाध्यता भन्नुपर्छ । गरीबको घरमा जन्म भयो । भगवानले पनि यस्तै दिलाएको छ । तिमीले पनि मेरो कुरामा स्विकार गरेकी छौ, सहमति जनाएकी छौ । मलाई पनि थाहा छ नि लाटी बिहे गरेको ३ महिनामै हामी एक–अर्काबाट टाढा भयौंं । पर्ख है मेरी मनकी जुनु म छिट्टै आउने छु अनि सँगै बस्ने छौं । सुख–दुःखका कुरा गर्ने छौं । हो दिले दाई पनि यस्तै सोच्छ होला । अनि आफ्नो जन्मलाई धिक्कार्छ होला ।
अब त गाउँघरका साना नानीहरु जानु भाउजुलाई भाउजु लाहुरे दाई कहिले आउनु हुन्छ भनेर भन्न थालेका छन् । जानु भाउजु आउँदोे दशैंमा आउनुहुन्छ । गुड मिश्री खान आउनु है बाबुहरु भनेर टपाल्न थालेकी छिन् । खै ! उता भने लाहुरे दाईको आजभोलि भारु रुपैयाँमा आँखा परेको छ । कहिले आउँछ त्यो त उसैलाई थाहा छ । यता भने जानु भाउजु पर्खि बसेकी छिन् र आफ्ना सुनौला सुन्दर सपनाहरु साकार गर्न कल्पिरहेकी छिन् । केवल उही लाहुरे दाईको भरमा ।।
ठेगानाः मष्टा गा.पा.२ बझाङ
हालः धनगढी कैलाली
This entry was posted in लघुकथा and tagged Santosh Rokaya. Bookmark the permalink.